Toro-hevitra 10 amin'ny famoronana fifanarahana mpitahiry mahomby | Orinasa Mpampanoa lalàna
Torohevitra 10 ambony momba ny famoronana fifanarahana mpiambina mahomby
Fiarovana ny orinasanao sy ny mpanjifanao
Ny fifanarahana fitazonana dia antontan-taratasy ara-dalàna izay miaro anao sy ny mpanjifanao tsy ho tafatsoaka raha misy ny fifanolanana. Rehefa manao fifanarahana amin'ny mpanjifa ianao, indrindra ny olona iray nifaneraseranao nandritra ny fotoana kelikely, dia mety tsy ho tianao ny handinika hoe mety ho marikivy ilay fifandraisana.
Mety handeha tsara ny zava-drehetra amin'ny mpanjifa ka tsy azonao an-tsaina ny toe-javatra ijanonany tsy manao izany. Mampalahelo fa misy fomba maro ahafahan'ny zavatra mandeha mianatsimo mandritra ny fifampiraharahana ataonao, ary tokony ho vonona hiatrika zavatra ianao rehefa mitranga izany. Ny fomba iray lehibe hiatrehana ireo fifanolanana mety hitranga dia ny fianarana ny fomba hamoronana fifanarahana mpihazona mahomby.
Ny fifanarahana voatazona voarindra dia manarona ireo lafiny manakiana rehetra amin'ny fifandraisan'ny orinasanao amin'ny mpanjifanao ary manome lalana ho anao raha misy ny fifanolanana. Ny fifanarahan'ny mpitazona dia manana tombony maro, izay niresaka momba ity lahatsoratra ity.
Ankoatr'ireo tombony ireo, ny fifanarahana mpitazona dia manampy anao hanapa-kevitra mialoha ny fomba famahana ny fifanolanana tianao hampiasaina raha misy ny fifanolanana misy eo aminao sy ny mpanjifanao. Fa inona no tokony hampidirina ao amin'ny fifanarahana mpitazona?
Ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ireo torohevitra 10 ambony izay afaka manampy anao hamorona fifanarahana mpihazona mahomby sy ny fomba hiarovana ny orinasanao sy ny mpanjifanao miaraka amin'ny fifanarahana fitazonana.
Fifanarahana fifanarahana mpitazona
Ny fifanarahan'ny retainer dia ampahany lehibe amin'ny fifandraisana ara-dalàna, raha tsy ny ankamaroany. Manomboka amin'ny orinasa ka hatramin'ny mpanao asa tanana ka hatrany amin'ny dokotera, ny tsirairay dia mila antontan-taratasy manan-danja vitsivitsy hanatanterahana azy rehefa manao fifanarahana izy ireo, ary ireo no antontan-taratasy ampiasaina hamoronana ny fifanarahana fitazonana.
Torohevitra 10 amin'ny famoronana fifanarahana mpihazona orinasa mahomby
1. Sarobidy: inona no hataonao ho an'ny mpanjifa?
Ny fifanarahana mpitazona dia tsy mitovy amin'ny karazana fifanarahana hafa satria tsy mandoa vola amin'ny asa vita izy ireo, dia mandoa ny fampanantenan'ny asa hatao ny mpanjifa. Noho izany dia ilaina ianao amin'ny maha freelancer anao hampazava ny mpanjifa ny sandan'ny fanekena fifanarahana mpihazona anao aminao.
Na dia mahasoa toy ny fahazoana asa eo ambany fitazonana aza dia tsy mora ny manatona azy. Matetika misy ny sakana amin'ny tsy fiankinan-doha amin'ny fisalasalana hanolotra mpitaingina mpanjifa na tsy afaka mampita ny antony maha-sarobidy ny mpihazona azy ny mpanjifa. Araka izany, tsara kokoa ny mamaritra hoe inona no sanda homenao ny mpanjifanao rehefa manasonia fifanarahana mitazona anao izy ireo.
Mba hamaliana ny fanontaniana momba ny soatoavina dia tsy maintsy mamaritra ny serivisy omenao ny mpanjifa tsy tapaka ianao.
2. Ataovy ny asa: fantaro ny mpanjifanao.
Ankoatry ny maha-fanao orinasa tsara azy, dia fahalalam-pomba ihany koa izy io, ary mandeha lavitra amin'ny famaritana ny asa hataonao alohan'ny hanomezan'ny mpanjifa sonia aminao. Alohan'ny hametrahana fifanarahana amina mpanjifa miaraka amina mpanjifa dia mandany fotoana amin'ny fanarahana mandinika azy ireo sy ny orinasany.
Fantaro ny fomba fiasan'ny orinasa sy ny fizahana ireo faritra ahafahan'ny serivisinao manampy amin'ny fampiroboroboana ny tombontsoan'ny orinasany. Rehefa manatona mpanjifa ianao ary mampiseho fahalalana ambaratonga toy izany momba ny orinasany, anisan'izany ireo faritra ahafahan'ny serivisinao manatsara azy ireo, dia nahavita mihoatra ny 50% ny tanjona ianao.
3. Alefaso ny tifitrao: apetraho amin'ny mpanjifa ny tenanao
Rehefa hazavao ny serivisy tianao hatolotra sy ny tombotsoan'ny mpanjifa dia tonga ny fotoana amarotana ny mpanjifa amin'ny mpitazona azy. Azonao atao amin'ny fomba roa na:
Amin'ny fiandohan'ny fifandraisanao amin'ny mpanjifa, rehefa manolo-kevitra ny hanao asa fifanarahana mahazatra ianao. Azonao atao ny misintona amin'ny safidin'ny fifanarahana fitazonana rehefa vita tsara ny asa.
Amin'ny fiafaran'ny asa fifanarahana, rehefa tsy tafiditra ao anaty ny mpanjifa. Amin'izao fotoana izao, mety ho nanana fahatakarana tsara kokoa momba ny filan'ny orinasa ny mpanjifa. Azonao atao ny manolotra soso-kevitra hanohanana ny asa vao vitanao na manome lanja fanampiny ho an'ny mpanjifa.
4. Ataovy ny fifanarahana: manapaha hevitra ny rafitra tianao hampiasaina
Zava-dehibe izany amin'ny fahitana ny fitantanana ny fotoana. Hanampy anao izany raha manapa-kevitra ianao hoe ahoana no tianao hiaraha-miasa amin'ny client. Azonao atao izany amin'ireto fomba manaraka ireto:
Azonao atao ny mangataka vola amin'ny mpanjifa vola isam-bolana omena mandritra ny fotoana nifanarahana. Mariho fa tsy maintsy soratanao ny zava-mitranga raha toa ka tsy nampiasa ny fotoana nomenao ianao, noho ny antony sasany, na nandany mihoatra ny fotoana tao anatin'ny iray volana ianao.
Azonao atao ny mandoa ny mpanjifa amin'ny andefasana entana voatondro. Ny fifanarahana dia tokony hilaza izay hitranga raha mihoatra ny habetsahan'ny asa nifanarahana ianao ary inona no hitranga raha sendra misy vonjy maika aminao. Iza no mitantana ny asa amin'ny tranga toy izany?
Azonao atao ny mahazo ny karaman'ny mpanjifa mba hidirany aminao. Azo atao izany raha toa ianao ka manam-pahaizana tadiavina amin'ny sehatra misy anao.
5. Farito ny entana azo aterina sy ny fe-potoana manaraka
Rehefa avy nanapa-kevitra ianao hoe inona no rafitra horaisin'ny fifanarahana mpihazona anao dia tsy maintsy fararanao ny haben'ny asa sy ny fotoana tokony hanantenan'ny mpanjifa ny asa. Aza hadino ny milaza azy ireo amin'ny teny mazava, satria ny tsy manjavozavo dia mampijoro anao fotsiny amin'ny aretin'andoha kely eny an-dalana.
Na dia milaza ireo aza ianao dia mila mamaritra ihany koa izay hitranga raha mangataka asa mihoatra ny faritry ny mpihazona azy ny mpanjifa. Lazao izay hitranga mba hahalalan'ny mpanjifa izay antenaina.
Ny fifanarahan'ny mpitazona anao dia tokony hampiditra fe-potoana voafaritra ihany koa. Fantaro hoe impiry ianao no hanatitra ireo entana azonao alain-tahaka ary hiantohana fa mifikitra amin'ny fandaharam-potoana ianao.
6. Mahazo karama
Ity dia ampahany manandanja amin'ny fifanarahana fitazonana anao. Tsy maintsy manapa-kevitra ianao hoe ahoana no tianao handoavana karama ary impiry. Ireto misy hevitra vitsivitsy hodinihinao:
Mangataka vola aloa mialoha ho an'ny asa mandritra ny fotoana iray
Mahazo karama isam-bolana - toy ny famandrihana
Fandaharam-potoana fandoavam-bola miovaova miankina amin'ny habetsaky ny asa ampanaovinao ao anatin'ny iray volana
7. Mitantana ny fotoananao
Ny mpanjifa sasany dia mandray fifanarahana fitazonana midika hoe misy mpanome serivisy afaka omena azy ireo isan'andro. Raha mahita fifanarahana mpihazona toy izany ny mpanjifanao dia tsy maintsy ajanonao ilay fiheverana azy ireo ary ataovy haingana. Raha tsy izany dia mety hidika ny faran'ny fiainanao araka ny ahalalanao azy ny fanekena fifanarahana mpihazona anao.
Mba hisorohana an'ity hetsika tsy mahafinaritra ity dia mila mandanjalanja ny fotoanao ianao ary mitantana araka ny tokony ho izy ny asanao. Tadidio fa tsy ity client ity irery no anananao, ary manana adidy amin'ny mpanjifa hafa iasanao ianao. Noho izany, tsy maintsy mamolavola ny fotoanao ianao hahazoana antoka fa afaka manompo mpanjifa hafa ianao ary mandray asa vaovao nefa mbola mahafeno ny andrasan'ny mpanjifanao amin'ny fitazonana azy.
8. Mariho ny fandrosoanao: mandefasa tatitra tsy tapaka
Ny fanaovana tatitra momba ny asa nataonao, ary ny fandrosoana nataonao dia lasa lavitra amin'ny fampisehoana amin'ny mpanjifanao fa ny fanapahan-kevitr'izy ireo hametraka anao amin'ny fitazonana iray dia mahasoa. Manome porofo amin'ny mpanjifa fa mahazo ny sandany naloany izy ireo.
Miankina amin'ny toetran'ny serivisy omenao azy ireo ny atin'ny tatitra. Tokony hisy koa anefa ny Index Key Performance Index (KPI) nifanarahana teo aloha. Ity dia mety ho index toy ny
Ny tahan'ny fandraisana andraikitra amin'ny media sosialy
Isan'ny mpamaky lahatsoratra bilaogy
Fisondrotana tsy azo refesina amin'ny varotra
Isan'ny mpanaraka tranokala
Mba hampivoarana tsara kokoa ny toe-javatra, manandrama manamarina ny asanao ary mampitaha ny tahan'ny fitomboana isam-bolana. Raha toa ka napetraka ny tanjona napetrakao ny KPI nifanarahana dia asehoy ny fandrosoana vitanao mba hahatanteraka ireo tanjona napetraka.
9. Famerenana tsy tapaka
Ny fifanarahan'ny mpitazona anao dia tokony hahitana famerenana matetika amin'ny mpanjifa. Azonao atao ny manamboatra tsikera isan-taona, isan-taona, telo volana na isam-bolana. Tokony hazavainao amin'ny client ihany fa raha mahita ny tsy fahafaliana amin'ny lafiny rehetra amin'ny serivisy omenao izy ireo dia tokony hanatona anao avy hatrany.
Ny fanamarihana dia tsy natao ho an'ny fotoana mahasosotra azy ireo fotsiny, fa ho an'ny seha-pifaneraserana omenao manontolo. Mety tafiditra ao anatin'izany ny fanavaozana ny tsena izay hahasoa ny mpanjifa na hampiatoana ireo dingana sasany izay tsy mandeha amin'ny client intsony - na noho ny fitomboana na ny fanovana tsena.
10. Famahana ny fifandirana
Ny famahana ny fifanolanana dia ampahany manandanja amin'ny fifanarahana mpihazona ary tsy tokony hodian-tsy jerena mihitsy na manao ahoana na manao ahoana mahafinaritra ny fifandraisana misy eo aminao sy ny mpanjifa. Tsy maintsy ampidirinao ny fehezan-teny ny fomba hiatrehan'ny roa tonta ny fifanolanana rehetra misy. Misy fomba efatra lehibe ahafahanao mamaha ny fifanolanana. Izy ireo dia:
Araka izay azo atao dia te hisoroka ny raharaham-pitsarana ianao. Noho izany dia tokony ampidiro fehezan-dalàna izay fomba famahana olana hafa tianao kokoa.
Makà fifanarahana Retainer amin'ny famolavolana fifanarahana ao UAE
Ny fisafidianana mpisolovava dia afaka manamboatra client iray. Raha mila serivisy ara-dalàna ianao dia zava-dehibe ny fisafidianana mpisolovava iray izay hanome serivisy ara-potoana, mahalala ny lalàna ary manome toky anao fa eo am-pelatanana ny raharaha. Na dia zava-dehibe aza ny traikefa sy ny fahazoan-dàlana ataon'ny mpisolovava, ny tena zava-dehibe dia ny karazana fifanarahana izay hidiranao miaraka amin'izany mpisolovava izany.
Ny fifanarahana mpihazakazaka mahomby dia misy faritra maro izay mety misafotofoto anao loatra ny fanarahana azy. Ireo mpisolovava anay ao Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants afaka manampy anao amin'ny zavatra. Ny hany ilainao dia ny mamaly fanontaniana vitsivitsy momba ny safidinao ary avelao ho anay ny ambiny. Mankanesa any aminay anio ary atombohy ny raharaha.